Teo amin’ny dingana 1/4 no raraka isika Malagasy tamin’ity fifaninanana kaontinantaly ity. Ny ekipan’i Benin no nandresy antsika tamin’izany. Teo amin’ny fifaninanana mitifitra kosa, mbola teo amin’izay dingan’ny 1/4 izay ihany koa no nahararaka ny ekipa Malagasy. Ireo ekipa 10 voalohany tamin’izao fifaninanana fiadiana ny tompodakan’i Afrika izao no tafita amin’ny dingan’ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany hatao any Laussane Suisse.
Ezaka goavana no vitan’ny fikambanana F.S.B.M na ny Federation du Sport Bouliste de Madagascar nahafahantsika niatrika iny fifaninanana taty Afrika iny. Fotoana fohy ihany koa ny fanomanana ny ekipa kanefa tsy nampitsanga-menatra ny vokatra azon’ny ekipa Malagasy.